Scary Stories to Tell in the Dark 2019 | Movie Review ျမန္မာ စာတန္းထိုး
ရုံတင်သွားတဲ့ Horror ကား ကောင်းကောင်းလေးပါဗျ။ဇာတ်လမ်းတွေက နာကျင်စေတယ်။ဇာတ်လမ်းတွေက အနာကျက်စေတယ်။ဇာတ်လမ်းတွေက ကျွန်တော်တို့ ဘယ်သူဘယ်ဝါရယ် လို့ ပုံဖော်ပေးတယ်။ခင်ဗျားတို့ရော ကိုယ်ရဲ့ ရှေ့ဖြစ်ဇာတ်လမ်းကို ကြိုသိရပါမယ် ဆိုပါစို့။ ​အကောင်းတွေတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။
အဆိုးတွေ… ကံကြမ္မာဆိုးတွေ ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒီလိုပါ။ ဟောလိုဝင်းနေ့မှာ ကလေးတစ်သိုက်က သရဲခြောက်တဲ့အိမ်ကြီးတစ်အိမ်ကို ရောက်သွားတယ်။ အဲဒီ အိမ်မှာ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခု ရှိတယ်။ အဲဒီအိမ်က အမျိုးသမီးရဲ့ဇာတ်လမ်းကို နားထောင်ပြီးတဲ့ကလေးတိုင်း ပျောက်ဆုံးသွားလေ့ ရှိတယ်။ မမျှော်လင့်ဘဲ အဲဒီအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကို ရခဲ့တယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ ဇာတ်လမ်းတွေ အလိုလိုပေါ်လာခဲ့တယ်။ ပေါ်လာခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ကလည်း တကယ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီကံကြမ္မာဆိုးကို သူတို့ ဘယ်လို ရှောင်လွှဲကြမလဲ??? ရှောင်လွှဲဖို့ရော ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား??? စာအုပ်ကရော ဘာရာဇဝင်တွေ ရှိနေတာလဲ??? ဇာတ်လမ်းက ကြောက်ဖို့ကောင်းသလို တော်တော်လေးလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။